Mpitsara manilika andraikitra amin’ny vahoaka Mahatonga fitsaram-bahoaka, hoy I Olala
Nohalefahana ny fepetra Afaka miasa hatramin’ny 5ora…
Nohalefahana ny fepetra momba ny hamehana, raha haravona ny valan-dresaky ny Filoha Rajoelina omaly. Ho an’ny Faritra Antsinana,
Mitaraina ny eny Ivato Mamoaka fofona maimbo beilay orinasa
Orinasa sinoa iray mpanamboatra kapa mampiasa akora pilasitika mandoto ny rivotra iainan’ny manodidina ka mampitaraina ny mponina manodidina azy eny Ivato-Ambohidratrimo eny.
Minisitry ny tontolo iainana Nanampy manokana ny tany niaviany
Na eo aza ny adidy ara-panjakana sy ny andraikitra apetraky ny Fitondram-panjakana dia tsy adino,hoy ny minisitry ny tontolo iainana, Baomiavotse Vahinala Raharinirina, raha nitatitra ny fitsidihany an’Imadiala tamin’ny faran’ny herinandro, ny tany nipoirana, ny Loharano.
Dr Randriamamizafy Ignace Mananontanona ny krizy politika
Nivadika ho krizy ara-tsôsialy, hoy ny Dr Randriamamizafy Ignace mpanao pôlitika, ny fiatrehantsika Malagasy ny famhaehana ara-pahasalamana ankehitriny noho ny fahasahiranan’ny olon-drehetra eo amin’ny lafiny fihariana sy fitdiavana izay hohanina isan’andro.
Araka ny didy navoakan’ny HCC sy ny CENI dia nahazo filoham-pirenena vaovao isika, hoy ny mpahay lalàna Willy Razafinjatovo na Olala.
Hita ho nisy fahamehana teo amin’ny CENI. Nisy fitarainana avy amin’ny kandida 2 tonta saingy nolavina. Tsy mahay na inona na inona daholo ve hatramin’ny mpahay lalàna iraisampirenena toa an-dry Arlette Ramaroson ? Toy izany koa ry Faniry Ernaivo sy Hanitra Razafimanantsoa ? Ny HCC irery ve no mahay lalàna ? Tokony hasiana fandinihana ihany, hoy ity mpahay lalàna ity. Midika ireny didy ireny fa mbola ny tsy nety teo ihany no tohizana. Tsy izahay no namoaka ny valim-pifidianana fa ny vahoaka Malagasy, hoy ny filohan’ny HCC. Ny fanilihan’ny fitsarana andraikitra amin’ny vahoaka toy izany no tsy mahagaga amin’ny fisian’ny fitsaram-bahoaka. Mirary ny filoha vaovao hahatanteraka ny fampanantenany aho ary mangataka manokana ireo solombavambahoaka mba tsy hiala bala foana amin’ny fandaniana ny lalàna mikasika ny harena azo tsy ara-dalàna izay efa narirarira herintaona. Io lalàna io dia tokony holaniana maika satria manakana ny rehetra tsy an-kanavaka tsy hangalatra. Na ny mpitsara aza voakasik’io. Tombony ho an’ny firenena koa satria hiverina any anaty kitapom-bolam-panjakana ireny harena azo tsy ara-drariny ireny.